Ngwa PC thermo
Bipute PDF faịlụ DWG
Mmemme ịchọta faịlụ na kọmputa gị
-Akpali Isiokwu - December 14,2019
Esi mee ka onyinyo ahụ dị na Photoshop
Otu esi eme ihe omume na Sandboxie
-Akpali Isiokwu 2019
Ịgbanwe ezigbo adreesị IP bụ usoro dị mfe nke a ga-eme na ndekọ abụọ na enyemaka nke mmemme ọkachamara. Taa, anyị ga-elekwasị anya na Chameleon - ngwá ọrụ a na-ewu ewu maka ọrụ a. Chameleon bụ usoro a na-ewu ewu iji gbanwee ezigbo adreesị IP, nke a ga-eji mee ihe maka ọnọdụ dị iche iche: ịnọgide na-enwe nkwenye zuru ezu na Intaneti, ijikọta ohere na saịtị ndị egbochiri, yana ịme nchebe nke ozi gị site na izo ya ezo.
Nchọta Firefox bụ ihe nchọgharị ọhụrụ bara uru.
Ndị na-akwọ ụgbọala maka Canon i-SENSYS MF4018
Ịtọpụta ihuenyo kọmputa na Windows 7
Download ndị laptọọpụ Lenovo G780
Esi gbanyụọ onye zoro ezo na Yandex Browser
Ịdebe ndekọ ahụ machibidoro onye nchịkọta usoro - ka esi edozie?
Otu esi ehichapụ foto niile site na iPhone
Otu esi eme ka igwe kamera na laptọọpụ
Ịmepụta nkata na Skype
Mgbasa ozi mgbasa ozi na ihe nchọgharị - esi ewepụ ya
A naghị ebudata ngwa ngwa na Ụlọ Ahịa Play
Otu esi eji ngwa Shazam maka gam akporo
Ndị ọrụ abụọ dị na Windows 10 na ọnụ ụzọ
Otu esi agba ọsọ na Instagram
Phoenix os - bara uru gam akporo maka kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ
Ịhazi D-Link DIR-300 Rostelecom B5 B6 B7
Wi-Fi routers D-Link DIR-300 rev. B6 na B7 Hụkwa: ịmepụta vidiyo DIR-300, ịmepụta redire D-Link DIR-300 maka ndị ọzọ na-enye D-Link DIR-300 NRU bụ onye na-ahụ maka Wi-Fi kachasị ewu ewu n'etiti ndị ọrụ Ịntanetị Russia, ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na ọtụtụ mgbe ha na-achọ ntụziaka banyere otu esi ahazie aha onye rawụta a.
Ịmezi "Wụnye na-ezughị ezu biko budata ma na-agba ọsọ" nsogbu na Tunngle
Mgbe ị wụnye Tunngle, ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike ịnwe ihe ijuanya na-adọrọ mmasị - mgbe ha na-agbalị ịmalite, usoro ihe omume ahụ na-enye njehie ma jụ ịrụ ọrụ. Na ọnọdụ a, ị ga-etinyerịrị ya ọzọ, mana ọbụlagodi mgbe nke a na-emekarị. Ya mere ị ghaghị ịghọta nsogbu ahụ.
Ịdebe ederede n'ime akwụkwọ MS Word
N'etiti ọtụtụ ọrụ bara uru nke Okwu Microsoft, otu furu efu, nke ndị nkwekọrịta ahụ doro anya - ikike iji zoo ederede, na n'otu oge ahụ ihe ọ bụla ọzọ dị na akwụkwọ ahụ. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọrụ a dị nso na ebe kachasị ama, ọ bụghị ndị ọrụ niile maara banyere ya.
Otu esi esi melite mmekọrịta na Yandex Browser
Ọtụtụ ihe nchọgharị nke oge a na-enye ndị ọrụ ha ka ha nwee ike imekọrịta. Nke a bụ ngwá ọrụ dị oke aka nke na-enyere gị aka ịchekwa data nchọgharị gị, ma nweta ya site na ngwaọrụ ọ bụla ebe a wụnyere ihe nchọgharị ahụ. Akụkụ a na-enyere aka na teknụzụ igwe ojii, nke a na-echebe site na egwu ọ bụla.
Iji kọmputa eme ihe iji lee TV na multimedia abụghị echiche ọhụrụ. Ọ bụ naanị na ị ga-ahọrọ software dị mma maka mmejuputa ya. Ka anyị lelee usoro ProgDVB ahụ. Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị leba anya: ihe ngwọta ndị ọzọ maka ikiri TV na kọmputa ProgDVB bụ ngwọta ngwọta maka ikiri telivishọn na ịnụrụ redio.
Windows 7 na-adabere n'oge echichi na ngwa ngwa ịwụnye
Ọ bụrụ na ị kpebiri ịtinye ma ọ bụ wụnye sistemụ arụmọrụ, mana mmalite nke ntinye nke Windows 7 kwụlitere, mgbe ahụ na n'isiokwu a, echere m na ị nwere ike ịchọta ngwọta. Ugbu a, ntakịrị ihe banyere ihe ọ ga-abụ. Na mbụ, mgbe m na-arụzi kọmputa, ọ bụghị ihe ọhụrụ na onye ahịa ịwụnye Win 7 na ha ga-emeri ọnọdụ ahụ mgbe ọhụụ nke na-acha anụnụ anụnụ nke ntinye ahụ, okwu "Malite ntinye" emeghị ogologo oge - ya bụ, dị ka mmetụta na ngosipụta dị iche iche o wee pụta na echichi ahụ dị oyi.
Esi arụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka WiMax Njikọ 5150
Otu esi eji Everest
Aghọọ àgwà ndị e ji mara vidiyo vidiyo Nvidia GTX 1180
Banyere kpọmkwem mgbe ọkwa nke onye mmepe vidiyo flavish Nvidia GTX 1180, mana naanị anyị nwere ike ịkọ, ma ị nwere ike ịchọta echiche zuru ezu banyere ngwaahịa ọhụrụ ugbu a. Ụlọ ahịa dị na Vietnamese h2gaming.vn, na-echeghị ikikere site Nivdia, mere ndokwa maka ire ere vidio na-enweghị ọkwa ma n'otu oge ahụ "ejirila ya" kọwaa ya na Network.
Ịtọ ntọala nke nchịkọta ederede Notepad ++
Ihe ngosi Notepad ++ bụ analọg dị nnọọ elu nke Windows Notepad. N'ihi ọrụ ya dị iche iche, na ihe mgbakwunye ọzọ iji rụọ ọrụ na ntinye ihe omume, usoro a na-ewu ewu karịsịa na webmasters na programmers. Ka anyị chọpụta otú ị ga-esi hazie ngwa ngwa Notepad ++.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na Microsoft Edge anaghị amalite
Microsoft Edge bụ ngwaahịa dị ọhụrụ na arụmọrụ dị mma na ọrụ. Ma enweghị nsogbu na ọrụ ya emebeghị. Otu ihe atụ bụ mgbe ihe nchọgharị ahụ adịghị ebido ma ọ bụ jiri nwayọọ nwayọọ laghachi. Download ụdị Microsoft Edge kachasị ọhụrụ. Ụzọ iji dozie nsogbu na mwepụta nke Microsoft Edge N'ihi nchụso iji weghachite ihe nchọgharị iji rụọ ọrụ na Windows 10, nsogbu nwere ike ịpụta.
DirectX: 9.0c, 10, 11. Olee otú ị ga-esi chọpụta nsụgharị arụnyere? Esi wepu DirectX?
Ekele niile. Eleghị anya, ọtụtụ, karịsịa ndị na-egwu egwuregwu kọmputa, anụwo ihe dị egwu dịka DirectX. Site n'ụzọ, ọ na-abịakarị na egwuregwu na mgbe ọ wụnye egwuregwu ahụ n'onwe ya, ọ na-eweta imelite mbipute DirectX. N'isiokwu a, m ga-achọ ịmatakwu ihe gbasara ajụjụ ndị metụtara ugboro ugboro banyere DirectX.
Ịmepụta ihe mgbawa na Microsoft Excel
Ngwurugwu nke uzo a bu otu n'ime ihe omuma. A na-ejikarị ya eme ihe ọ bụghị nanị maka ebumnuche sayensị, kamakwa maka ihe ndị bara uru. Ka anyị mụta otu esi eme usoro a site na iji ngwa ngwa Excel. Ịmepụta parabole Ihe atụ bụ otu eserese nke ọrụ quadratic nke ụdị ụdị f (x) = ax ^ 2 + bx + c.
Anyị na-emezi onyinyo overexposed na Photoshop
N'oge foto nnọkọ foto, a na-enweta foto mgbe mgbe ma ọ bụ ọkụ ọkụ na-ezighi ezi, ma ọ bụ karịa n'ihi ihu igwe. Taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi edozi foto ahụ a na-ahụghị, ma gbaa ya ọchịchịrị. Mepee ihe odide na nchịkọta akụkọ ma mepụta otu okpukpuchi ndabere na ụzọ mkpirisi igodo CTRL + J.
DOCX gbanwere DOC
Ebumnuche nke ederede ederede na DOCX na DOC bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu, mana, ọ bụghị mmemme niile nwere ike ịrụ ọrụ na DOC, mepee usoro ọgbara ọhụrụ - DOCX. Ka anyị lee otú e si gbanwee faịlụ site na otu vordovskogo usoro ọzọ. Usoro ntụgharị Ọ bụ ezie na Microsoft nwere usoro abụọ, naanị Okwu nwere ike ịrụ ọrụ na DOCX, na-amalite site na Okwu 2007, ọ bụghị iji kọwaa ngwa ndị ọzọ mmepe.
Otu esi arụ ọrụ na incognito mode na nchọgharị Google Chrome
Otu n'ime ihe nchọgharị kachasị ewu ewu oge anyị bụ Google Chrome. Ọ na-enye nlekọta ntanetị dị mma n'ihi ọnụnọ nke ọtụtụ ọrụ bara uru. Dịka ọmụmaatụ, ụdị incognito pụrụ iche bụ ngwá ọrụ dị mkpa iji hụ na ezughị oke aha mgbe ị na-eji ihe nchọgharị. Ọnọdụ Incognito na Chrome bụ ọnọdụ pụrụ iche nke Google Chrome, nke na-egbochi ichebe akụkọ ihe mere eme, cache, kuki, budata akụkọ ihe mere eme na ozi ndị ọzọ.
Ihichapụ Ngwa Zona
Usoro mpaghara ahụ bụ onye ahịa dị mfe, karịsịa maka ndị ọrụ na-ahọrọ ibudata faịlụ multimedia. Ma, ọ dị mwute, ọ nwekwara ụfọdụ adịghị ike. Ndị a na-agụnye, dịka ọmụmaatụ, nnukwu ibu dị oke, dịka onye ahịa mmiri, na nnukwu ọrụ na ebe nchekwa usoro ọrụ n'oge ọrụ.
Ịtọba touchpad na laptọọpụ
Kọmputa ndị nwere kọmputa nwere ngwaọrụ ndenye na-edochi keyboard na òké. Maka ụfọdụ ndị ọrụ, touchpad bụ ngwa ngwa dị mfe, nke na-enye gị ohere iji aka arụ ọrụ sistemụ. Otú ọ dị, n'ọtụtụ ọnọdụ, enweghị ntọala ọzọ nwere ike ime.
Lelee ọsọ ọsọ online
Mgbe ị na-arụ ọrụ na kọmputa ruo ogologo oge, onye ọrụ ahụ malitere ịchọpụta na edere ederede ya site na ya na-edeghị ihe na-enweghị njehie na ngwa ngwa. Ma olee otu esi elele ọsọ nke ide na keyboard n'emeghị ihe omume ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ? Ịlele ntaneti ọsọ ọsọ A na-atụkarịkarị bọtịnụ mbịakọta site na ederede ederede na mkpụrụ okwu kwa nkeji.
Naghị egosi video na gam akporo, ihe ị ga-eme?
Nsogbu nkịtị maka ndị ọrụ ekwentị na ekwentị na Google Android bụ enweghị ike ile vidio na intaneti, nakwa na fim ndị ebudatara na ekwentị. Mgbe ụfọdụ, nsogbu ahụ nwere ike ịnwe echiche dị iche: a naghị egosi vidiyo ahụ na ekwentị ahụ na Osisi ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, enwere ụda, ma kama nke vidiyo, enwere naanị ihuenyo ojii.
Copyright © 2019 Ngwa PC thermo
https://termotools.com ig.termotools.com © 2019